Guddoomiyaha SOLJA Oo Ka Hadlay 2 TV Oo Dhawaan Xukuumadu Xidhay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Guddoomiyaha SOLJA Oo Ka Hadlay 2 TV Oo Dhawaan Xukuumadu Xidhay
Hargaysa (SDWO): Ururka suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA ayaa uga digay warbaahinta kala duwan in ay si ku talax-tag wax uga baahiyaan warar la xidhiidha colaad beeleedka ka taagan degaanka Ceel-Afweyn ee gobolka Sanaag.
Guddoomiyaha ururka SOLJA Maxamuud Cabdi Jaamac, ayaa ugu baaqay weriyeyaasha in ay ka fogaadaan war kastoo fidno kicin kara ama xiisadda sii hurin kara oo la xidhiidha colaadda beelaha u dhaxaysa ee Ceel-Afweyn.
Waxaanu u soo jeediyay warbaahinta iyo weriyeyaashaba in ay ka digtoonaadaan in ay waraysiyo ka qaadaan xubnaha arrintaasi saamaynta ku leh ee ka soo kala jeedda labadaas beelood, kuwaasoo uga sii daraya xaaladii labadda beelood u dhaxaysay.
Maxamuud Cabdi Xuuto, oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaaladda Hargaysa, waxa kaloo uu intaas ku daray in maalmahan danbe ay qaar ka mida telefishanadda gaarka loo leeyahay baahiyeen warar aan wanaagsanayn oo arrimahaasi la xidhiidha.
Isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Habeenadii u danbeeyay telefishanadda qaarkood waxay baahinayeen warar dhiillo leh oo la xidhiidha xaaladda Ceel-Afweyn, iyadoo ay waraysanayeen dad aan runtii fahamsanayn dhibaatadda iyo saamaynta ay arrintaasi yeelanayso.
Waxaan halkan uga jeedinayaa, iyadoo aan hore-na ugu jeedinay, saxaafada Somaliland gaar ahaana telefishanadda in aanay wax la aqbali karo ahayn in maalin walba ay baahiyaan dad iska hadlaya oo amaankii dalka iyo xaaladda colaadeed ee labadaas beelood u dhaxaysa sii hurinaya”.
Sidoo kale guddoomiye Xuuto, ayaa wax aan la aqbali Karin ku tilmaamay in weriyeyaasha degaamadda Ceel-Afweyn ka hawl galaa marka madaxda xarumaha warbaahintu ay ka joojiyaan in ay baraha bulshadda ku baahiyaan.
“Sidoo kale wax la qabali karo ma aha, in weriyeyaasha ka hawl galla degaamadda colaad beeleedku ka taagan yahay, markay masuuliyiinta TV-yadda iyo tifaftireyaashu ka joojiyaan warar xaaladda sii hurin kara, in ay baraha bulshadu ku kulanto ee Internet-ka ku baahiyaan”ayuu yidhi guddoomiyaha SOLJA.
Dhinaca kale guddoomiyaha SOLJA waxa uu ka hadlay saamaynta ay ururkoodda ku yeelatay laba telefishan oo madax banaan oo ay dhawaan xukuumadda Somaliland ruqsadda shaqo kala noqotay.
Kadib markii lagu eedeeyay in ay baahiyeen waxyaabo lidi ku ah qaranimadda Somaliland. Waxaanu yidhi “Laba telefishan ayay dhawaan xukuumadu xidhay, saamayn ayay runtii ku yeesheen ururka SOLJA oo dacwadoodii hawl badan ayay ururka gelisay. Anagoo og qaladaadka dhinac walba ka dhacay, haddii ay xukuumadda noqoto, gaar ahaan wasaaradda warfaafintu siday hawshaasi u gashay iyo mulkiileyaashii TV-yadaasi”.
Guddoomiye Xuuto, oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in xal laga gaadhay in labadaas TV ay dib shaqadoodda u bilaabaan, hase yeeshee haddii aanay TV-yadu ka waantoobin wararka iyo barnaamijyadda wax u dhimaya qaranimadda iyo kuwa kicinaya colaadaha beelaha in waxyaabahaasi ay culays ku keenayaan ururka SOLJA.
“Inkastoo aanu imika xal ka gaadhnay, hadana waxaanu u aragnaa ku sii socoshadda hay’daha kale ee warbaahinta oo maalin walba wadadaas uun qaadaya, in ay culays weyn ku tahay ururka SOLJA, qaranka Somaliland-na ay dhibaato ku tahay”ayuu yidhi Xuuto.